इतिहासको दौड र मनोग्रन्थि- विविधा - कान्तिपुर समाचार
इतिहासको दौड र मनोग्रन्थि
यो बेला धेरै कुशल, इमानदार नेता, शासक दल, विरोधी दल र नागरिक, लेखकको आवश्यकता छ । भेटिएको छैन ।
भाद्र २३, २०७५ अभि सुवेदी
काठमाडौँ — अहिले नेपालमा राजनीति र परिवर्तनका बहस अखबारमा धेरै र विचारपत्र र सेमिनारमा कम भए पनि आइरहेका छन् । अखबारमा पनि हल्लाउने बहस थोरै छन्, तर भइरहेका छन् । बहसका विषय दुई तिहाइको सरकारका काम र कमजोर नेपाली कांग्रेस हुन् ।
ओझेलमा पर्दै गएका तर पछि फेरि आउन सक्ने वा आउने मुद्दाका बहसका छलफल त्यति हुँदैनन् । यौन हिंसा र हत्याका शृङ्खला अति चिन्ताका विषय हुन्, जसको बहसमा अपराधीहरू अदृश्य हुंँदै जानु, जासुसी उपन्यासमा जस्तो ती शंकाका घेराभित्रका न्यारेटिभमा मात्र वर्णन हुँदै जानु, अमूर्त विषय बन्दै जानु धेरै चिन्ताको विषय हो ।
नेपालमा विचारका बहसको मानक दुई आयामिक हुन्छन् । यथार्थ भने तीन आयामिक र जटिल बन्दै गएको छ । दुई आयामिक बहसमा एमाले र माओवादी धारका कमिनिष्टहरू थिए, ती एक भएर तिनका सरकार बनेका छन् । बाँकी अर्को दुई आयाम भनेको कांग्रेस र कमिनिष्टकै द्वैत इतिहास हो ।
तर त्यो संस्कारमा पनि परिवर्तन भएको देखिंँदैछ । हिन्दु राज्यवादी र धर्म निरपेक्षवादीका बहसमा त्यस्तै द्वैतता छ । त्यसैगरी संघीयता र एकल राज्यवादी संविधानको बहसको द्वैतता पनि छँदैछ । मलाई लाग्छ, धर्म वा निरपेक्षता, संघीय र संघीयता विरोधी बहस धेरै मात्रामा बहसमै सीमित रहन सक्ने राजनीतिक चेतना देखिए । तर ती बहस भइरहनु धेरै आवश्यक कुरा हो ।
बहसले प्रजातान्त्रको चरित्र देखाउँछ । सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने बहस भनेको नेपालका कमिनिष्ट अनि तिनको प्रतिरोधी शक्ति बीचको द्वन्द्वका विषयको हो । नेपालको कमिनिष्ट दलका कमिनिष्ट विरोधी नै भन्ने खास दल छैनन्, किनभने नेपालका कमिनिष्टहरू पहिलेदेखि र मलाई स्व. मित्रलाल सुवेदी दाजुले स्कुल पढ्ने वयदेखि व्याख्या गरेका कमिनिष्ट नै होइनन् । ती अब छैनन् । त्यसैले लौ कमिनिष्ट भएकोले यिनका विरोधीले कामै गर्न दिएनन् भन्ने तर्कको अब कुनै तुक छैन । त्यसो गर्नु पुरानो शास्त्रलाई नयाँ भाष्यमा राखेर पुराण सुनाउने बानीको नैरन्तर्य हो ।
तर एउटा अर्को यथार्थ भने छ । त्यसको कहीं कतै व्याख्या भेटिंँदैन । त्यो सूक्ष्म सामाजिक मनोविज्ञानको विषय हो, बृहत्तर सामाजिक न्युरोसिसको विषय हो । त्यो भयानक परिवर्तनको विषय हो, जसमा नेपालका कमिनिष्टहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । नेपाली कांग्रेसको पनि त्यसमा ठूलै भूमिका छ । तर सबैभन्दा धेरै ठूला उथल–पुथलका कारक कमिनिष्टहरू नै हुन् ।
त्यसमा गणतन्त्र पनि पर्छ । कमिनिष्ट पनि माओवादी र एमाले भनेर चिनिनुपर्छ । त्यसैले हिजोसम्मको सामाजिक संरचनामा द्वन्द्वका जोडी तत्त्व प्रस्ट थिए–राजतन्त्र बनाम गणतन्त्र, एकतन्त्र बनाम लोकतन्त्र, सामन्ती समाज बनाम परिवर्तनकारी समाज । तर ती दुई द्वन्द्वरत तत्त्वका विखण्डन कसरी भए र त्यस्ता परिवर्तनले कति समय लियो भन्ने कुरामा हामीले विचार गरेका छैनौं ।
विश्वविद्यालयमा सामाजिक मनोविज्ञानशास्त्री एकजना पनि भेटिंँदैनन् । राजनीतिशास्त्रीहरूले लेख्ने र बोल्ने विषय अत्यन्त कालिक र अखबारी बन्दै गएका देखिएका छन् । त्यसैले त्यतातिर तिनका पनि ध्यान गएका देखिंँदैनन्, अथवा लगभग त्यस्ता विश्लेषण भएका छैनन् ।
जब विश्वमा नै चाखको विषय, कतै चिन्ताको विषय बनेको नेपालको माओवादी आन्दोलन ७ दलसँग इतिहासमा बृहत शान्ति सम्झौता गरेर राजनीतिमा आयो, त्यसले नेपालको राजनीतिक मानक नै हल्लायो । दृष्टिहरू परिवर्तन भए । बाहिर पनि हल्लिए । मैले त्यो कालमा बाहिर सेमिनारमा गएका बेला त्यतातिर यो कुराको प्रभाव देखेंँ ।
दिल्लीमा त म आफैं स्वतन्त्र छलफलमा उठ्नपर्ने परिस्थितिमा परेंँ । यतै लेखेको छु । नेपालमा यो सबै उपलब्धि मानेर बोल्ने गरेका मेरा अनुभव छन् । मे २६, २००६ को दिन विश्व नाट्य संस्था आईटीआईको एकतिसौं सम्मेलनमा मनिलामा मेरो कार्यपत्र थियो । प्रस्तुतिपछि अनेकौं प्रश्न आए । मेरो कार्यपत्रसँग असम्बन्धित प्रश्नहरू आए ।
ती नेपालको राजनीति, खासगरी माओवादी आन्दोलन र शान्तिको बहसमाथि केन्द्रित थिए । मैले आफ्नै किसिमले उत्तर दिएँ, अनि भनेँ, यो मेरो विषय होइन । लाग्यो, सत्य कुरा भनिन, किनकि नेपालको परिवर्तनको बहस सबैको विषय थियो । पछि नोभेम्बर २१, २००६ मा बृहत शान्ति सम्झौता भयो ।
तर त्यो बेला नेपालमा भइरहेको बहसले फिलिपिन्समा पनि तरङ्ग ल्याएको थाहा पाएर खुसी र किञ्चित चकित पनि परेको थिएँ । त्यसको केही घन्टापछि मलाई फिलिपिनो थिएटरका पहिल्यै चिनिसकेका दुई युवा आएर भने, ‘तपाईंलाई भेट्न फिलिपिनो सायद माओवादी कम्युनिष्टका व्यक्ति आएका छन्, हामीले पर्खाएका छौं, जौं ।’ म विलखबन्द भएँ । कसैलाई सोध्ने पनि कुरा भएन ।
त्यो सम्मेलनमा भाग लिन अमूक संस्थातर्फबाट डा. हर्क गुरुङकी छोरी प्रतिभाशाली महिला हिमाली गुरुङ आएकी थिइन् । तिनलाई सोध्नुपर्‍यो भन्ने ठानेर खोजेंँ । गइसकेकी रहिछन् । मैले उनीहरूलाई भेटेंँ । मोरो लिबरेसन फ्रन्टसँग सम्बन्धित थिए क्यारे उनीहरू । अहिले प्रतिबन्धित छैनन् । मैले भनेँ, म कुनै दलको मानिस होइन, एक थिएटरकर्मी हुँ, म जान्दिन । तर उनीहरूले पत्याएनन् । ती तीनजना बुद्धिमान, शान्त र आकर्षक बोली भएका मानिस थिए । निकै कुरा गर्‍यौं ।
तिनीहरूलाई नेपालको राजनीति थाहा थियो । तिनीहरूलाई माओवादी शान्ति गर्न लागेका छन् भन्ने कुराले तानेको थियो । मेरो निजी विचार हो भन्दै मैले भने, ‘अबको शक्ति भनेको शान्ति सम्झौता हो । त्यसबाट जन्मिने राजनीति नेपालको गतिशील र गणतन्त्रात्मक हुनेछ ।’ कुरा निकै मिलाएछु । त्यसो भन्दा गौरवान्वित भएको थिएँ । पछि २१ नोभेम्बर २००६ मा शान्ति सम्झौता भयो । मैले ती मानिसलाई बिर्सिन सकिन ।
पछि नेपाली माओवादीहरू अनेकौं परिवर्तनभित्र पसे । तिनका गणतन्त्रका नारा अरू दलले पनि माने । तिनले सरकार बनाए, छोडे, बनाए, छोडे । चुनावमा भाग लिंँदै जाँदा कम भोट ल्याए । पछि एमाले नामको सबभन्दा ठूलो कमिनिष्ट र लोकतन्त्रात्मक दलसँग ऐक्य गर्ने अभियान चल्यो ।
त्यही बेला प्रचण्डले भने– हामीले त जसरी पनि एमालेसँग ऐक्य गर्नैपर्छ । हामी त पुल तरेर आइसक्यौं, फर्केर जाने पुल भत्किइसक्यो । बाटो छैन । मैले त्यो बेला मनिलामा भेटेका ती शान्तिको मोडल खोजिहिँंडेका भुक्तभोगी कमिनिष्ट मानिसलाई सम्झेंँ । म अरू कुरा लेख्न चाहन्न, ठाउँ पनि छैन, तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरा संक्षिप्तमा राखिहाल्छु ।
नेपालमा अरू देशका लामा इतिहासका घटना यो शताब्दी र अघिल्लो शताब्दीका १० वर्षमा पूरा गरेछौं, हामीले । यत्रा क्रान्तिकारी, लोकतन्त्रवादी र अरूका सम्झौताले संविधान बन्यो । पहिचान र क्षेत्रका अधिकारका कुरा उठे । बहस चलेकै छन् ।
यस बीचमा धेरै छलफल भए, घटना भए । यो सबै कुराले अनि पुँजीको खेल र मोहले, राजधानी केन्द्रित चरित्र र कमिनिष्ट र बुर्जुवाका अन्तररेखा कतिपय विलिन हुँदै गएकोले, क्रान्ति र परिवर्तनलाई सहयोग गर्ने गरिब र टाढाका जनता उपेक्षित हुँदै गएकाले (‘केसी, गान्धी र माक्र्स’मा लेखेका छौं, यसै स्तम्भमा), नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रवादी दल दिसाहीन भएकोले, समाजमा अलिक धन र हतियार अनि अराजक अवस्थाको फाइदा लिने अवसर खुलेकाले उन्मत्त भएका कानुनी मर्यादा पालन नगर्नेहरू, शक्तिमा बस्नेहरू, रक्षा गर्न बस्नेहरूका विभेद हराउँदै गएकाले यो समाजमा अहिले नराम्रा घटना भएका हुन् ।
नेपालको इतिहासले दुम्बु तोडेर छोटै समयमा माइल पार गर्दा जन्मेका–भत्केका मनोग्रन्थिहरूले काम गर्दैछन् । यो बेला धेरै कुशल, इमानदार नेता, शासक दल, विरोधी दल र नागरिक, लेखकको आवश्यकता छ । भेटिएको छैन ।
यही बेला प्रधानमन्त्रीले एउटा भाषणमा विस्मयले रञ्जित बोलीमा बोलेको सुनेँ । तिनले भने, ‘अहिले समाज नैतिक ह्रासको अवस्थातिर गयो ।’ धेरै अर्थहरू तँछाड–मछाड गर्दै निस्केको अनुभव गरेंँ । तर यसको मूलकारण बुझ्न अहिले कसैले समाजको माथि भनेजस्तो दौडको कारणमाथि ध्यान दिनसकेको देखिएन ।
मिडियामा अहिले कहिल्यै अनुभव नगरिएका द्वन्द्वका कथाहरू आइरहन्छन् । अर्को विषय भ्रष्टाचार र ठेक्कापट्टाले टक्क रोकिएको समयको चित्रण हुन्छ । घटनाका चरित्र साधारणदेखि भयानकसम्म छन् । संहिताका फौजदारी र देवानी चरित्रमाथि बहस भइरहेका छन् । चिकित्सक, आम सञ्चारधर्मी, महिला अधिकार अभियन्ता र सुरक्षाकर्मीहरू सबैले ऐनमा संशोधनका निम्ति आफ्ना तर्क राखेका छन् ।
सबै कुरा निराकरण गर्ने थलो संसद् हो, जहाँ विशाल हलमा यताउता छरिएर बसेका सांसदहरू देखिन्छन् । त्यहाँ खासै हतार, जोश र इतिहासको पहिलो अध्याय रचना गर्न बस्नेका अभिव्यक्ति देख्न सितिमिती पाइँदैन । तर एउटा कुरा सबैले मान्नुपर्छ– यो परिवर्तनको काल भएकोले माथि भनेका हलचलहरू हुनु स्वाभाविक हो । तर नैतिक ह्रासको विषय जटिल छ ।
कतै हतार–हतार दौडेका इतिहासले जिम्मा दिएका र बनाउने मानिसहरू थकान मार्ने ग्रन्थिले ग्रसित हुनलागेका त होइनन् ? सम्झेर झसङ्ग हुन्छौं ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:५५
तीज खारेजीको प्रश्न
तीज सामन्ती समाजको उपज भए पनि यसलाई झरिझुट्ट उर्वर र हराभरा बनाउन अब पुँजीवाद हाजिर छ । सामन्तवादसँग संघर्ष गरेर व्यक्तिको बुद्धिसंगत विश्वासलाई टेवा दिएको पुँजीवादी प्रणाली कालान्तरमा आइपुग्दा उल्टै सामन्ती प्रथा र परम्पराको नयाँ अभिकर्ता बनेर उभिएको छ ।
भाद्र २३, २०७५ सरिता तिवारी
काठमाडौँ — बर्सेनि तीज आएसँगै यसबारे बहस तीव्र बन्छ । कतिपयको तर्क छ, तीजमाथि केको बहस ? मनलागे मनाऊ, नलागे चुप बस । कति भन्छन्, महिलामाथिको हिंसा र उत्पीडन उन्मूलन गर्नुपर्छ भने स्त्रीद्वेषी प्रथा, परम्परा र संस्कृतिमाथि बारम्बार प्रश्न र प्रतिक्रिया गरिनुपर्छ । यी समाजका लागि कति ग्राह्य र कति त्याज्य छन्, तिनको जाँच गरिनुपर्छ ।
तीज महिलाले आफूलाई निरीह र हीन, पुरुषलाई सामथ्र्यशाली मानेर विवाहितले लोग्नेको आयुवृद्धि र अविवाहितले चाहेको वर प्राप्तिका लागि व्रत र पूजा गरी मनाइने मिथ जोडिएको पर्व हो । ऋषिपञ्चमी महिलाका महिनावारीका दिनलाई अपवित्र र अछूत मानी रजस्वला अवधिका भक्ष्याभक्ष्य, गम्यागम्यका ‘पापकटनी’ गराउने अभ्यास हो । यसका कतिपय विधि हाँसो उठ्ने छन् ।
तीज : संस्कृति कि सकस ?कतिपय विश्लेषक र संस्कृतिकर्मी तीजको रूढिसँग जोडिएको पाटो सभ्य समाजका लागि घातक मान्छन् । उनीहरूका अनुसार तीज खारेज गर्नुपर्ने पर्व हो । कुनै प्रचलित परम्परा खारेज गर्नु बोल्नजति सहज छैन । कुनै संस्कृतिलाई व्यापक स्तरमा ठूलो समुदायले अप्रासंगिक बनाउनसकेमा त्यो नयाँ धारातर्फ प्रवाहित त हुन्छ तर प्रचलित संस्कृतिको बलात् खारेजी कति सम्भव होला ?
संस्कृति अत्यन्तै जटिल र अनिश्चित किसिमको विषय हो भन्छन् चिन्तक निनु चापागाईं । यसलाई मानिसले निर्माण गरेको दोस्रो प्रकृति भनिन्छ । संस्कृति समाजको अर्थतन्त्र र राजनीतिक विचारधाराको अभिव्यक्ति हो ।
माक्र्सवादीहरू संस्कृतिको रचना र विकासलाई उत्पादन सम्बन्धसँग जोडेर व्याख्या गर्छन् । संस्कृतिसँग मानवजातिको सर्वतोमुखी विकास जोडिनुपर्छ भन्ने मान्छन् । संस्कृतिलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने दृष्टिमा तत्कालीन समाजको आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाको आलम्ब चाहिन्छ भन्छन् । तीजको सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ ।
तीजको सांस्कृतिक उद्भव पुराणका कथालाई टेकेर सामन्तवादी व्यवस्थामा भयो । तत्कालीन समयका निर्देशक ब्राह्मणग्रन्थ र स्मृतिहरू सामन्तवादी अर्थव्यवस्थाको अभिव्यक्ति स्वरूप बने । खस–आर्य समुदायका विधिविधान तिनै ग्रन्थ र स्मृतिजन्य संहितामा आधारित छन् ।
संहिताकाल अघि आर्य र अनार्यका रूपमा विभाजित पूर्वीय समाज त्यसपछि वर्णाश्रम व्यवस्थाले पेसा अनुसार निर्धारित जात हुँदै जन्मकै कारण छूत र अछूत वर्णमा विभाजित भयो । नारी–पुरुष बीचको सांस्कृतिक विभेद योभन्दा पुरानो मानिन्छ ।
ब्राह्मणवादी संहितामा पुरुष श्रेष्ठ र नारी हीन मानिएका प्रशस्त सन्दर्भ भेटिन्छन् । एकातिर महिलालाई शक्ति, श्री र विद्याका स्रोत मानेर पुज्ने परम्परा छ । अर्कोतिर महिलामाथि चरम शोषण, दोहन र हिंसासमेत हुन्छ । यस्तो दोहोरो मापदण्डवाला समुदायमा तीज पर्व रचना भएको छ ।
यो स्पष्ट रूपमा मर्दवादी आर्थिक र सांस्कृतिक वर्चस्वको राजनीतिले निर्माण गरेको प्रभावशाली संकथन हो । यसमा कथिएका किंवदन्ती र कथा त्यस्ता साक्ष्य हुन्, जसले महिलाको शरीरमाथि, तिनको विवेक र स्वायत्ततामाथि निरन्तर भय र हस्तक्षेपको खेल खेलिरहेका छन् ।
तीजमा पूजा गर्नाले आध्यात्मिक आनन्द पाइन्छ भन्ने महिलाको पनि कमी छैन । त्यस्तो आनन्दको तर्क बडो हास्यास्पद र विडम्बनापूर्ण लाग्छ । तीजका पूजा–व्रत केवल पितृसत्ताजन्य अहंकारकै स्तुति र आराधना हुन् । महिलाको व्यक्तित्व र गरिमाका उपहास हुन् । पुलिङ्गकेन्द्री राजनीतिको दुष्चक्रका अगाडि निरीह आत्मघातभन्दा बढी केही होइनन् ।
यो राजनीतिले पुरुषलाई स्वामी र महिलालाई स्वामित्वको अधीनस्थ भोगको वस्तुमात्रै मान्छ । यो चिन्तनले युगौंदेखि निष्कंटक रूपले महिलामाथि शारीरिक र मानसिक हिंसा गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । यो चिन्तनले पुरुषलाई झन्–झन् बर्बर र पाशविक बनाइरहेको छ ।
तीजको सांस्कृतिक अभ्यास विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि उस्तै छ । हिजो मानिससँग भौतिकवादी सोचको अभाव थियो । शास्त्र र धर्मका नाममा शासन गर्नेको बोलवाला थियो । उक्त सत्ता धेरै बलियो भएकाले समग्र समाजले चाहेर–नचाहेर पत्याउनैपथ्र्यो ।
अब ज्ञान–विज्ञान र कार्यकारणको खोजी गर्दै जाँदा हाम्रा संस्कृति कति सही र कति गलत छन्, थाहा पाइँदैछ । भौतिकवादी वैज्ञानिक चिन्तन, तार्किक सोच र अभियानमार्फत तीज वा यस्ता पर्वका जडता उखेल्नु आजको महत् कार्यसूची हो ।
शिक्षा र पठन संस्कृतिको प्रसारले पछिल्ला दशकमा महिलाहरू संस्कृतिका विद्रुप पक्षमाथि प्रश्न उठाउने हैसियत बनाइरहेका छन् । बिना प्रश्न र कार्यकारण, आत्मघाती रुढी र अन्धताको पछिपछि दगुर्न इन्कार गर्नेहरूको राम्रै पंक्ति तयार भइरहेको छ । तर त्यो एकैठाउँमा छैन, छरिएको छ ।
त्यसले लेखपढ, विमर्श, अनुसन्धान, प्रतिकार गरिरहेको छ । साझा उल्लासको मानक हुँदा संस्कृति अनुकरणीय र संरक्षण योग्य हुने हो । विशाल समुदायमाथि विभेद र हिंसा प्रेरित हुने कथा गाँसिएका छन् भने त्यो संस्कृति होइन, सकस हुन जान्छ । बाल्यकालदेखि नै संस्कृति भनेर मान्दै आएका कुरा आफ्नालागि पीडक नै किन नहुन्, मानिस त्यसैमा आनन्दित होउन्जेल सामुहिक प्रतिकार र परिवर्तन गाह्रो हुन्छ ।
अज्ञान नै सुख हो भनेजस्तै । तर जुन दिन त्यस्ता अभ्यासको असली खेला बुझिन्छ, प्रतिरोध गर्ने हिम्मत पलाउँछ । हिजोसम्म मान्य र ग्राह्य कुरा छोडिँदै जान्छन् । सामन्ती र धर्मप्रधान बन्द समाजका सांस्कृतिक ढाँचा यसरी नै फेरिँदै र तोडिँदै आएका हुन् ।
उन्मत्त पुँजीवादको नाच
अतितमा प्रबोधन र पुनर्जागरणको लहर लिएर सामन्ती संस्कृति समाप्त गर्न भिडेको पुँजीवादले आज पुरानै मान्यता बचाउन सामन्ती शक्तिसँग सम्झौता गरेको छ । व्यक्तिभन्दा अघि नाफा, समाजभन्दा पहिला बजार र आवश्यकताभन्दा बढी लाभको कुचक्रमा फँसेको पुँजीवादका लागि महिला नै प्राथमिक लक्षित उपभोक्ता हुन् ।
मिडिया र प्रचारबाजीको उपयोगबाट महिलालाई जति मूर्ख बनाएर नाफा हासिल गर्न सकिन्छ, अन्य उपभोक्तालाई सकिन्न भन्ने कर्पोरेट बजारविज्ञलाई भलिभाँती थाहा छ । हजारौं वर्षदेखि हस्तान्तरित सामन्ती सौन्दर्य मिथले महिलालाई ‘राम्री’ बन्ने अवचेतनात्मक भ्रमको भुलभुलैयामा यसरी जकडेको छ कि त्यसलाई हम्मेसी आफूबाट बाहिर निकाल्न महिला नै तयार छैनन् ।
चाहे ती जतिसुकै उच्च शिक्षित किन नहोउन् । यस्तो स्थितिमा विश्व स्तरका अर्बौंं डलरका बहुराष्ट्रिय कस्मेटिक उद्योगमात्रै होइन, दक्षिण एसियामा हावी रहेको सुन र पहिरनजन्य उद्योगको प्रबद्र्धन गर्ने सुनौलो अवसर बनेको छ, तीज ।
हामी बुझ्नेहुँदा आमाले हरेक वर्ष तीजको बेला पारेर नयाँ लुगा हाल्दिनुहुन्थ्यो । सीमित आयस्रोत भएको परिवारमा ती कपडाले दसैं र तिहारसमेत मनाउन सकुन् भन्ने हुँदो हो । आमाले आफ्नालागि तीज या दसैंमा नयाँ सारी किनेको मेरो स्मरणमा छैन ।
कि कसैबाट उपहार पाएको, पारी खुम्चिसकेको हरियो सारीमा मात्रै देखेको सम्झन्छु कि सामान्य सुती र खद्दरको धोतीमा । गाउँमा अरू पनि उस्तै थिए । हामीलाई हुर्काउने, पढाउने मेलोमा आमाले धेरैजसो गहना बेचिसक्नुभएको थियो । तर आमामा गहनाबिना नाच्दा–गाउँदा कुनै हीनता देखिन्थेन ।
मैले चिनेका अरू महिलामा पनि झकिझकाउ लुगा र गहनाका लागि प्रतिस्पर्धा भएको म सम्झन्न । तीजको खानेकुरामा पनि ऋणै लाग्ने खर्च भएजस्तो लाग्दैन । डेढी दरमा घरको चामलसँग साटेका अनदी चामल, घरकै दही, घ्यु र करेसाकै काँक्रा, गाभा, घिरौंलाले दर निप्टन्थ्यो । आमाले बोलाएर ख्वाउने चेलीबेटी धेरै हुन्थे । अहिलेको जस्तो आडम्बरी, देखावटी चलन हुन्थ्यो भने आमालाई कति गाह्रो हुँदो हो!
अहिले तीजको मौकामा महँगा–गह्रुङ्गा सारी, तीभन्दा महँगा गहनाको प्रदर्शनी देख्दा नेपालीको क्रयशक्तिको ग्राफले जिब्रो टोक्ने बनाइदिन्छ । हुन त समाजमा बढ्दो आडम्बर र प्रदर्शनमुखी चरित्र दसैं, बिहेबटुल आदिमा पनि अभिव्यक्त भइरहेकै हुन्छ । यसमा महिलाको मात्रै दोषभाग छ भन्न मिल्दैन ।
आफ्ना श्रीमती लुगा–गहनाले लादिएर हिँड्दा प्रतिष्ठाको चुली टेकिने पुरुष मनोविज्ञान पनि उत्तिकै सहभागी छ । त्योभन्दा अझ ठूलो सहभागी सामाजिक मनोविज्ञान हो, जसले नाक, कान र गलामा टल्कने सुन र रत्नहरूका आधारमा महिलाको इज्जत र मूल्याङ्कन गर्छ ।
आज तीज महिलाको कम व्यापारी र कर्पोरेटहरूको ज्यादा भैसकेको छ । पत्रिकाका पाना पल्टाउनुस् या टेलिभिजन हेर्नुस्, रेडियो सुन्नुस्, तीजमा लगाउने गहना र लुगाका विज्ञापनको भिड छ । हामी तिनैका पछाडि दगुरेका छौं । पछिल्ला वर्षका गीत सुन्नुस्, बजारले तीजका भाकालाई पनि मज्जाले उपयोग गरेको मात्रै होइन विकृत समेत बनाइरहेको छ । हामीलाई तिनै गीत चाहिन्छ ।
बजार अत्यन्तै नृशंस र हिंस्रक सत्ता हो । सामन्तवादी समाजभन्दा पनि चरम शोषण र दोहनको भरमा यसको शासन चल्छ । यसलाई मुनाफाभन्दा बढी केहीसँग सरोकार छैन । तीजलाई सामान्य खर्चले नधानिने पनि यसैले बनाएको हो । यसबारे गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने समाजको सतहमा छरपस्ट देखिएका व्यक्तिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार अझ मौलाउने निश्चित छ । समग्र समाजलाई भ्रष्ट आचरणतर्फ धकेल्ने र नारीलाई असीमित आवश्यकताको डमी उपभोक्ता बनाउने जीवनशैलीले चाडलाई संस्कृति बनाएको छ कि विकृति ? सोच्नैपर्छ ।
तीजका सांस्कृतिक आधार जेजस्ता भए पनि विगतमा तीजका भाकामा नारी जागरण र मुक्तिको स्वर मुखरित गर्ने काम खुब भए । देशमा चलेका भूमिगत, अर्धभूमिगत र खुला सबै प्रकारका राजनीतिक आन्दोलनलाई टेवा दिन तीजका गीत धेरै हदसम्म सफल भए पनि ।
तीजको मौकामा गाउँका चोक–चोक र सहर–बजारमा सामुहिक रूपमा महिलाहरूले प्रतिरोध र जागरणको माहोल बनाएकै हुन् । यसमा सचेत राजनीतिकर्मी पुरुषहरूसमेत परोक्ष भूमिकामा रहे । यो एक प्रकारले तत्कालीन पार्टीहरूको प्रभाव विस्तारको रणनीति पनि थियो । त्यही पर्यावरणबाट लाभान्वित भएको पुस्ता हो, हाम्रो । मेरै राजनीतिक चेतनाका बीज यस्तै गीतसमेत हुन् ।
२०४६ सालको आन्दोलन अघि र त्यसपछि केही वर्षका तीजका गीत म रामै्र सम्झन्छु । त्यस्ता गीतले मानिसमा राजनीतिक चेतना भर्न ठूलो काम गर्थे । भूमिगत राजनीतिको लागि तीज एउटा अचुक अवसर हुन्थ्यो । महिला मुक्ति र सांस्कृतिक जागरणका मुखर भावले तीज मुक्तिको सपना देख्ने महिलाका लागिसमेत प्रेरक अवसर लाग्थ्यो । पार्टीका महिला संगठन सम्पूर्ण शक्ति लगाएर यस्ता गीतको माहोल बनाउन सक्रिय हुन्थे ।
न स्थिति त्यस्तो रह्यो, न राजनीति । त्यसरी चेतना विस्तारको भूमिका खेल्ने पार्टीहरू सत्ता राजनीतिका प्यादा हुँदै गए । सत्ताको वरिपरि घुमेर, सत्ताकै दहमा डुबेर मग्न भए । तिनका महिला संगठन लगभग ‘हाइबर्नेसन’को अवस्थामा पुगेका छन् । ती ब्युँझन्छन् कि ब्युँझन्नन् थाहा छैन । पार्टीहरूमा ब्याप्त चिन्तनको भ्रष्टीकरणले कार्यकर्तादेखि नेतृत्वसम्मलाई निलिसकेको छ । अधिकांश राजनीतिकर्मी हिजोका प्रतिबद्धता र सांस्कृतिक दायित्वबाट भाग्दैछन् । नारी मुक्तिको संकथनलाई बेवारिस बनाएर छोड्ने पार्टीहरू कुनै कोणबाट क्षमायोग्य छैनन् ।
प्रगतिशील लेखक र सौन्दर्य चिन्तकहरूको एक तप्का तीजको जरामै हिंसा र विभेद छ भन्नेमा एकमत छ । ती मध्ये केही यसलाई पूर्णरूपले बहिष्कार र खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । केही तीजका आधारभूत सांस्कृतिक रुढीलाई निषेध गरेर यसमा निहित गीत–सङ्गीतजन्य पक्षलाई समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको सहकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । यद्यपि संस्कृति हठात् बन्ने र उत्तिखेरै भत्काउन सकिने चिज होइन ।
लामो अभ्यासले मानिसको मनोविज्ञानमा जमेर बस्छ, यो । समाजमा त्यसलाई खारेज गर्ने ब्यापक सामुहिक इच्छाको उदय हुनुअघि अग्रभूमिमा धेरैले बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सचेत तप्का तयार हुनुपर्छ । यस्तो तयारीका लागि ठूलो मानसिक ऊर्जा, संकल्प र वैचारिक धारा चाहिन्छ ।
हामी मध्ये कति त्यस्तो ऊर्जा, संकल्प र वैचारिक धारा लिएर बलिदान हुन तयार छौं ?
विगतमा तीज महिलाको दु:ख विरेचनको एउटा अवसर, एउटा विकल्प थियो । छोरीचेलीलाई चार दिन भए पनि माइतीमा बोलाएर मिठो–मसिनो ख्वाउने, बुहार्तनका सकसबाट अलिकति भए पनि राहत दिने मौका थियो । विगतको पारिवारिक संरचना, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थामा त्यो ठिकै थियो ।
आज छोरीलाई बाआमा वा दाजुभाइ भेट्न, दिदीबहिनी जम्मा हुन तीज पर्खनु पर्दैन । आज महिला विगतको तुलनामा स्वतन्त्र छन् । आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन् । यद्यपि महिलाको स्वतन्त्रता अझै ‘अवस्थाजन्य’ घेरामा सीमित छ । तर लामो इतिहासभन्दा महिलाको हैसियत निश्चित रूपमा फरक छ ।
अब पुलिङ्गकेन्द्रको राजनीति समाप्त गरेर समताको राजनीति स्थापित गर्नसके, महिलाले पूर्णरूपमा आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक अभ्यास गर्नसके तीज आफैं अप्रासंगिक हुनेछ । यसले स्वत: खारेजीको बाटो समात्नेछ । अधिकार प्राप्त स्वायत्त महिलाको चित्रमा ‘अर्काको घर जाने जात’को लेबल हट्नेछ ।
जन्म र कर्मका घरको सीमा मेटिएर महिलाले आफ्नै रचनाको ‘घर’मा निर्भय, निर्धक्क र स्वाभिमानसहित सास फेर्न पाउनेछन् । यस्तो स्थितिमा महिलालाई हरेक दिन उन्मुक्तिको दिन हुनेछ । त्यसका लागि जतिसुकै जोखिम मोलेर भए पनि आत्मघाती भाष्यले बनेका संस्कार परित्याग गर्न महिला नै तयार हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:५४